10600nm CO2 Laser Factory - China 10600nm CO2 Laser Vagadziri, Vatengesi
Inotakurika 10600nm yekurapa runako kana wemhuka co2 yekuvhiya laser Z15A
CO2 laser kurapwa uchishandisa chisimbiso-kure co2 laser, wavelength 10600nm, iyo inobuda isingaonekwe infrared laser danda inozivikanwa nediki, yakakwira simba density. Laser danda goho negirazi rinotarisa, iyo inotarisisa yetishu tishu inogona kuburitsa yakanyanya kupisa tembiricha, inogona kushandiswa kucheka, kupisa.
CO2 Laser zvachose vanga ganda tag kubviswa maitiro Z25A
pigment maseru pasina kuita chero yechunyama chakakomberedza, iyo inoderedza kupora nguva uye inosimudzira iyo yeganda maitiro echisikigo ekugadzira nyowani uye hutano hutano.
Freckle Kubvisa Fractional Co2 Laser Ganda Kurapa Z15C
kupomba kwekurapa inzira yakachengeteka, isinga pindike iyo inokutendera kuti uwane zvekare ganda nyowani, rine hutano rwekunaka kwako.
Inotakurika co2 fractional laser yeScar kubvisa Z15B
kupomba kwakapatsanurana mukuti inobata zvakanyanya maseru eepidermal pigment maseru asingakonzere chero nyama dzakatenderedza,
40W RF Fractional CO2 Laser jenareta Vaginal Kusimbisa Scar Kubvisa ER700C
30W Fractional Medical Laser Yakavharwa Off CO2 Laser ER700B
mushonga unodururwa unoburitsa zviuru zvakadzika, zvidiki zvidimbu mukati meganda rako, zvinonzi madiki ekurapa nzvimbo. kupomba kwakapatsanurana mukuti inobata zvakanyanya maseru eepidermal pigment maseru asingakonzere chero nyama dzakatenderedza,
40w CO2 Fractional Laser Commercial Vaginal Kusimbisa ER800A
Muchina une matatu masisitimu: Fractional CO2, VRL uye CO2, inogona kugutsa zvese zvido, yakanakisa kudyara Kuchengetedzwa kwakachengeteka.
10600nm Fractional co2 Laser Ganda Kumutsazve ER600B
10600nm Fractional CO2 Laser ndeimwe yemalaser anonyanya kushandisirwa anoshandiswa mukuzora dermatology, Inoshanda pane Acne mavanga, Pigmentation, Freckles, Mitsetse yakanaka uye kurapwa kwekudzora makwinya.